भाषण र सोच को बोली को एक वर्ष भित्र भित्र जान सक्छ: मार्टिन व्रिजल्याण्ड
यदि तपाईं सोच्नुहुन्छ "आह, त्यो त्यो चाँडो नहीं जानेछ", तपाईंले ध्यान दिनुभएको छैन। आफ्ना कंधोहरू रित्तो र सोच्नुहोस्: "ओह ठीक छ, त्यसो भए तपाईले के सोच्नु भएकोमा कम भन्न सक्नुहुन्छ, म कुनै व्यक्ति होइन जुन केहि र सबै कुराको बारेमा मेरो विचार दिन आवश्यक छ", त्यसोभए तपाईंले चाँडै नै पत्ता लगाउनुहुनेछ कि यो सबै भन्दा अपेक्षा छ कि यो सबै भन्दा कम छ। या तपाईं डच मान्छे मध्ये एक हो जुन केवल समस्या चाहँदैनन् र आफ्नो काममा राम्रो होईन, संग्रह एजेन्सीहरू वा तपाइँको ढोकामा बेमेलहरू चाहँदैनन् र छुट्टी कम्तिमा 1x प्रति वर्षमा जान चाहनु हुन्छ? क्या तपाईं कसैलाई जसले गुस्सेको मान्छे मनपर्दैन र के हो कि तिमी जो कोही साँझमा ट्यूबमा आउन चाहन्छौ भने, त्यसपछि ताजा र फलफूल अर्को बिहान फेरि बिहान जाने को लागि बिस्तरमा जानुहुन्छ? के तपाईं जो कोही 1 वर्षमा 4x हुनुहुन्छ आशामा पार्टीको लागि मतदान गर्न जाँदैछ कि यो अझै पनि नीदरल्याण्डमा एकदम सही तरिकाले व्यवस्थित छ? त्यसपछि तपाइँ जर्ज ओवेलोको ठूलो भाइ प्रहरी राज्यको लागि आदर्श पात्र हुनुहुन्छ। त्यसोभए तपाईं पढ्नको लागि पढ्नको लागि आवश्यक छैन, किनकि तपाइँ भाषण, भाषणको स्वतन्त्रता वा विचारको स्वतन्त्रताबारे चिन्ता गर्नुपर्दैन। आखिर, तपाइँसँग लुकाउन केही छैन।
खैर, मानौं तपाईंले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई सिकाउनुहुन्छ कि टीकाकरण यति आवश्यक नहुन सक्छ र राज्य एक साल चाहन्छ कि यो अनिवार्य हुन्छ, त्यसपछि तपाईंलाई त्यो पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। वा सोच्नुहोस् कि तपाईं आफ्नो बच्चा वा मातृभाषा केटाकेटी वा केटी हुनुहुन्छ, तर प्राथमिक स्कूलमा यो सिक्छ कि 'यो' लिङ्ग छनौट गर्नु पर्छ, त्यसपछि तपाईं आफ्नो मुख बन्द राख्न छ किनकि तपाईंको रायबाट भिन्न छ राज्य। "आह, भिजल्याण्ड, त्यो तरिका, यो नहुने छैन, कस्तो बकवास!"अब तपाईं यो साइट छोड्न सक्नुहुन्छ, किनभने तिनीहरू सबै भू-भागहरू र टाढाका कथाहरू हुन् जुन तपाईंले यहाँ पढ्नुहुन्छ। वा तपाईं पनि उत्सुक हुनुहुन्छ? "हो, तर विचारको स्वतन्त्रता सधैं अवस्थित हुनेछ", अब तपाई फलाउन सक्नुहुनेछ। तपाईंको खातिर, प्रविधिमा गहिराइको परिचय जो कि परिचयको सीमामा छ। केही गर्नका लागी एलन मस्कले यो सुरु गरेन कम्पनी Neuralink र राम्रो कारणको लागि यो सरकारमा सबै गोपनीयता नियमहरू छन् टाढा जानुहोस्ताकि तपाईं सिधै आफ्नो टाउको पछि पछि हेर्न सक्नुहुन्छ। के त्यो स्कीफाई फिलिम काल्पनिक छ? होइन, यो टेक्नोलोजी हो जुन तपाईले अझै सोच्नु भएको छ टाढा। तर तपाईंले 30 वर्ष पहिले आशा गर्नुभएको थियो कि तपाइँ एक सानो फोन पर्दामा चलचित्रहरू हेर्न र आफ्नो हातको खामोशबाट ध्वनि र छवि संग संसार वरिपरि सबैलाई कुरा गर्न सक्नुहुन्छ? 'परिचालक अगाडी हेर्दै छ' र यो सरकारले के गर्छ। तिनीहरू पहिल्यै अग्रगामी प्रविधिमा फिट बनाउने कानुन तयार गर्दै छन्। तपाईं अझै पनि आफ्नो हातले कि इशारा इशारा बनाउन सक्नुहुन्छ र छिट्टै यो पृष्ठ बन्द गर्नुहोला, किनकि तपाईं पनि धेरै सोच्न चाहँदैनन् कि भ्रामक साजिश विचारहरू संलग्न छन्।
सबैलाई दूर एक साजिश साजिश विचारको रूपमा लिने समय भएको छ। कम से कम, यदि तपाईं पैराग्राफ 1 बाट व्यक्तिको वर्गमा नपराउनु हुन्छ, तर त्यसपछि यो राम्रो छ कि तपाईंले थप पढ्नु भएको छ। हामी एक समयमा बाँचिरहेका छौं जब सरकारहरूले प्रतिरोध समूहहरूमा घुसपैठ र वैकल्पिक मिडियामा वेबसाइटहरू घुमाएर आफ्नो एजेन्डालाई लुगा लगाउँछन्, तनावको क्षेत्र सिर्जना गर्न वा भाषण र सोचाइको स्वतन्त्रताको कथनको लागि प्रजनन मैदान प्रदान गर्न। न केवल मैले एक पटक देखेको छु पिएघा र एन्टिफा को बीच एक हदमा एक प्रदर्शन को समयमा त्यहाँ पुरा तरिकाले भ्रष्टाचार को बारे मा कुरा गरिरहेको थियो, जहां पुलिस एंटिफा प्रदर्शनकर्ताओं ने साफ़ तौर पर "पिघ्ता प्रदर्शनकारियों" पर उन्हें "जाने" के लिए तैयार तैयार किया; त्यसपछि तिनीहरूलाई फेरि क्यामेराको सामनेमा पक्राउ। मैले स्पष्ट रूपमा देखेको थिएँ कि सबै गिरफ्तारहरू र दंगाहरू पूर्ण रूपमा दृश्यमा थिए। मैले पनि देखेको छु (पाठकको क्यामेरा छविहरू प्रयोग गरी) कि योमाईएल इलगगनसँग जुन्से भलगर्सेन्ड पाउनाइने पुरा तरिकाले दृश्य मा। "हो, ठीक छ, तर त्यो एक-अफ हुन सक्छ"। के तपाई साँच्चै सोच्नुहुन्छ कि यो मात्र हो? यो एक म त्यहाँ थियो, तर यो प्रदर्शन र दंगे को 'दृश्य राख्नु' कहिलेकाहीं मान त्यहाँ जाने समय थियो, तपाईंको धारणा प्रभावित छ, newsreels र पत्रपत्रिकाका लागि दृश्य प्रदान गर्न अभिप्रेरित सबै छ। "हो, तर तिनीहरू ती सबै प्रदर्शनकर्ताहरू भाडामा लिन्छन्?"तपाईं अझै पनि मीठासाथ सोच्नुहुन्छ। मैले यसलाई हेर्दै र यसलाई फिल्माएको छु। तपाईं कति जना प्रमाणहरू चाहनुहुन्छ? के मैले सबै प्रदर्शनीहरू चलचित्र गर्नुपर्छ? सरकारहरू यसको लागि धेरै छन्। थेसिस र एंटी-थीसिसको मार्गमार्फत प्रहरी राज्यलाई बलियो बनाउनको लागि तनावको क्षेत्र आत्मनिर्माण हो।
यसले के गर्छ? खैर, बायाँ र दायाँ एकअर्कालाई हल गर्न आवश्यक छ र दुवै समूहलाई चरम विचारहरू र चरम व्यवहारसँग जोड्न आवश्यक छ। उदाहरणका लागि, तपाईं लिंक (आत्म-निर्मित) लिंक गर्न सक्नुहुनेछ (एजेन्टर प्रोटोक्रोइजर) ज्यार्ट वाइल्डर्सका विचारहरू र उदाहरणका लागि तिनीहरूलाई नव-नाजिस वा समान समूहहरूमा राख्नुहोस् (यूएस हेर्नुहोस्)। तपाईं प्रदर्शनको क्रममा त्यो मिश्रण देख्न मिल्ने गरेर यो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाइँ निश्चित वेबसाइटहरू लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ जुन समूहमा सही आवाज बोल्छ र तपाईंले मानिसहरूको धारणामा 'चरम दाहिने' केहि सिर्जना गर्नुभएको छ। तपाईं बाबाको साथ बाहिरी गर्नुहोला। तपाईं एक (आत्म-निर्मित) विरोधी-फिस्स्टिस्ट समूह को केहि विरोध आंदोलन र बाहिरी वेबसाइटहरुमा एन्फाफा भनिन्छ; त्यसपछि केहि चीज जस्तै संयुक्त राज्य अमेरिका मा चार्ल्सटेलविले आइपुगेको छ, जहां दुवै समूह एक-दूसरे मा हमला गर्छन। निस्सन्देह, धेरै पाठकहरू विश्वास गर्न चाहँदैनन् कि सरकारहरूले अहिलेसम्म सोच्न सक्षम छन् र वैकल्पिक मिडिया र प्रदर्शनको आन्दोलन दुवैलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सक्षम छन्। एक विश्वास गर्न चाहन्छ कि सोभियत युनियन केजी जासूसहरूको भनाइ थियो र पूर्वी जर्मनी स्टैसीसँग फटिरहेको थियो, तर डेमोक्रेटिक वेस्टमा त्यस्तो चीज छैन। छोडिएको! यो समय हो कि तपाईं लोकतान्त्रिकताको त्यो मिठो छविलाई बढावा दिन सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई फिल्माएँ। मैले तपाईंलाई चित्रहरू देखाउँछु। तपाईंलाई कस्तो प्रमाण चाहिन्छ? या यो तपाईं एनओएस समाचारहरू द्वारा देखाइएको छ भने केवल केहि विश्वास गर्नुहुन्छ? हो, त्यो तरीकाले काम गर्दछ, ठीक छ?
वैकल्पिक मिडिया र विरोध आंदोलनहरू प्रायः गुप्त सेवाहरूद्वारा नियन्त्रणमा छन्। यो साँच्चै भन्न छ कि धेरै गोपनीय यी सेवाहरूको लागि काम गर्दै छन्। लोहे पर्दाको समयमा पूर्वी जर्मनीमा स्टेस् फ्ल्याटको प्रत्येक ब्लकमा जासूस थिए। हामी अब हेर्न सक्छौं कि यो युरोप र अमेरिकामा अझ राम्रो छैन। त्यहाँ धेरैजना छन् जसले पैसाको किरणको विनिमयमा गोप्य भूमिका खेल्छ; तपाईंको कर पैसा, जुन तपाईंसँग कुनै थप अन्तदृष्टि छैन (लेखांकन को झलक भन्दा अर्को छ कि राजनीतिज्ञहरूले तपाईंलाई पीडा गर्न सक्छन्)। त्यसैले यदि तपाईं विरोध देख्नुहुन्छ र तपाईका नाकहरूमा ब्यानर र रूमालहरू साथ प्रदर्शनकर्ताहरू देख्नुहुन्छ भने तपाईले एक चोटि आफ्नो टाउको खरिद गर्न सक्नुहुन्छ र सोच्नुहुन्छ: "के त्यो नि: शुल्क देश सही हुन सक्छ?"मैले यसलाई पहिले नै 2013 मा देखेको छु (हेर्नुहोस् यहाँ)। निस्सन्देह त्यहाँ पनि एक स्शन प्रभाव हो र निस्सन्देह त्यहाँ निष्पक्ष प्रदर्शनकारी हुनेछ, तर यो सम्पूर्ण योजना हो। तथापि, त्यहाँ AIVD को पेरोलमा अधिक व्यक्तिहरू छन् भने तपाईं विश्वास गर्न हिम्मत गर्न सक्नुहुनेछ। यो वेबसाइटहरू र वेबसाइट प्रशासकहरूमा पनि लागू हुन्छ। केही कुरा के देखिन्छ र धेरै वेबसाइटहरू वा फोरमहरू बलियो क्षेत्रमा ल्याइएका छन् जुन चरम बायाँ, चरम दाँया वा कोटीको साथ 'लिङ्क' राख्न सक्षम हुन्छन्। पछिल्लो समूहको लागि, वेबसाइटहरु लाई सुरूवात गरिएको छ जुन स्थापित आदेश को धेरै नैतिक आलोचना प्रदान गर्दछ। कहिलेकाहीँ तिनीहरूले अयोग्य सत्य ल्याउँदैन, तर अक्सर यो des des जानकारी सँग जोडिएको छ।
हामीले भर्खरको आत्म-प्रमाणित पूर्व-बैंकर रोनाल्ड बर्नार्डको राम्रो उदाहरण देख्यौं। यस तथ्यको अलावा यो मानिस एनएलपी प्रविधिहरू उनीहरूको युट्युब भिडियोको दर्शकहरूको कथालाई उनीहरूको कथाको समझाउन प्रयोग गर्थे, उनले बारम्बार 'सियोनका ऋषिहरूको प्रोटोकल' बताउँछन्। त्यो एक सजग रणनीति हो, किनकि हामी यसमा पहिले नै देख्न सक्छौं de Volkskrant, जसले भन्छ कि यो सिद्ध साजिश सिद्धान्त हो। म Volkskrant उद्धरण गर्दछु:
बर्नार्डले उल्लेख गर्दैन कि यो यहूदी नेताहरूको बैठक जसले विश्वभरिका लागि योजना बनाएको छ। प्रारम्भिक बीसौं शताब्दीमा रूसी चिनियाँ समर्थकको समर्थकहरूद्वारा संचलनमा राखिएको छ, लेख विविध विविधताहरू बीच लोकप्रिय रहेको छ: राष्ट्रिय सोशलवादीहरूलाई फिलिस्तीनले हमासबाट।
र यो वास्तवमा उद्देश्य हो। रोनाल्ड बर्नार्डले बारम्बार र भावनात्मक रूपमा मानिसहरूलाई कागजातको रूपमा चिन्ह लगाउँदछ जसको आधिकारिक नकली समाचार विश्लेषकहरूले यो "साबित" नकली समाचार "भन्नेछन्। त्यसपछि शायद बर्नार्डको अनमास्किङ पछ्याउनेछ। म आशा गर्दछ कि बर्नार्ड एक सपनादार को रूप मा अनजाखा हुनेछ जसको सीवी स्पष्ट छैन र जो कि बैंकिंग प्रणाली को शीर्ष तहहरुमा ओपरेटिंग को उनको कहानी को आविष्कार गर्दछ। सम्पूर्ण वैकल्पिक मीडियाले रोनाल्ड बर्नार्डको पछाडिको इतिहासलाई हेरे। बित्तिकै त त्यो एक पूर्व बैंकर र आफ्नो कहानी थिएन कि "लगभग आफ्नो औंठी चूसने बच्चा बलिदान गर्न, त्यसपछि खेल कुनै पनि महत्वपूर्ण ध्वनि 1x को मुद्रास्फीति नेतृत्व छ; 1x मा सम्पूर्ण वैकल्पिक मिडिया उजागर र यो सूचीबद्ध सबै महत्वपूर्ण विश्लेषण।
हामी धेरै परिष्कृत र धेरै विचारशील खेल संग काम गर्दैछौं, जसमा शासक शक्तिले दस चाल अगाडी सोच्छ। आलोचनात्मक सोच अत्यन्त बायाँ वा चरम दाँयासँग जोडिएको हुनुपर्छ। यसले गहिरो शब्द 'घनिष्ठ सोच' बनाउँछ। यो खतरनाक सम्पत्ति हो कि खतरनाक सम्पत्ति हुन्छ। यसैले यो समय हो कि तपाईं यो शतरंज खेल को शुरुवात को माध्यम ले देखने को लागि। यो समय हो कि तपाईं पनि यो जान्न सिक्नु भएको छ कि नीदरल्याण्डमा वैकल्पिक मिडिया समान लक्ष्य संग स्थापित हुन्छ। महिलाहरु र सज्जनहरु जो तम्बू को दौडने को लागि, तब दान को लागि माँगता छ, तर आकृति मा तपाईं देख सकते हो कि मुद्रा छ। तिनीहरूले शहर र देश वरिपरि कुनै पनि प्रतिरोध र यात्राको अनुभव गर्दैनन्। यो मलाई भिन्न भयो जब मैले पत्ता लगाए कि यो 'अस्थायी रूपमा लेख लेख्छ' जसले तपाईंलाई टाउको खर्च गर्दछ भने तपाईले नियन्त्रण बल क्षेत्रसँग सम्बन्धित हुनुहुन्न (पढ्न यहाँ पुरा इतिहास).
क्षणिकताको समय, खोज्दै र केहि गर्न सकिंदैन। यो खेल तपाईंको आँखामा खेल्नेछ र यो अपरिवर्तनीय रूपमा 'सत्यताको मंत्रालय' को नेतृत्व गर्नेछ। केहि पनि छैन के लागि RTL Z प्रस्तोता Roderick Vilo निम्न स्तम्भ संग:
झूटो समाचारको विरोधको सत्यता
रणनीतिक सल्लाहकार नेशनल सिक्योरिटी र साइबर विल्फ्रेड रिट्दीक अनुसार, नकली समाचार हाम्रो लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो खतरा हो। Rietdijk पनि सेना मा ब्रिगेडियर जनरल हो र नकली समाचार को विरुद्ध उनको रक्षा वास्तविक समाचार को लागि एक चिन्ह हो। त्यो गुणस्तर चिन्ह सरकार द्वारा जारी गरिनु पर्छ। डर नगर्नुहोस्। यो तपाइँको आफ्नै रुचि र हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाको हो। थप पढ्नुहोस् ..
यसैले यो समय हो कि तपाई वास्तवमा कार्य आफैं लिनुहुन्छ। तपाईं खेल पंच गर्न मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। गोप्य सेवाहरूको आवरण एजेन्टहरू उजागर गर्न र अब अन्धासाथ 'सत्यको लागि राम्रो राम्रो हो' पछ्याउन मद्दत गर्नुहोस् 'रोनाल्ड बर्नार्ड वा मान्छे जस्तै मान्छेबाट कथाहरू Arjan Bos (पृथ्वी-पत्र)। वेबसाइटहरू पछ्याउन रोक्नुहोस् जसले त्यस्ता शिलहरूलाई प्रवर्द्धन गर्दछ किनभने तिनीहरू माथि वर्णन गरिएको उद्देश्यको सेवा गर्दछ। तपाईंले किन गर्नु पर्छ? षड्यंत्र जस्तो देखिने उद्देश्य पर्दाफास गर्न जो यी साइटहरूमा, हातमा त्यहाँ चाँडै राज्य निष्कर्षमा गरिनेछ किनभने "नक्कली समाचार" अवस्थित र त्यहाँ 'लाग्यो' जो ब्यान्ड भित्र निर्धारण गर्छ कानून हुन हुनेछ कि, 'लिखित' र 'बोली' हुन सक्छ। सत्य मंत्रालय नजिक भएको छ र भले पनि वैकल्पिक मिडिया फरक विचारको लागी लडिरहेको जस्तो लाग्छ, उनी भेडाको कपडामा भेडा हुन्छन् जसले तपाईलाई स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्न को लागी राज्य प्रदान गर्दछ।
ट्याग: aivd, सेवा, सेवाहरू, विशेष, विचारहरू, गोप्य, अभिव्यक्ति, सत्य सत्य, नकली समाचार, पुलिस राज्य, बोल्नुहोस्, वैन, स्वतन्त्रता
2 सेप्टेम्बर 2017 मा 11: 35
त्यहाँ थप छन् कि READ र रोनाल्ड बर्नार्डको ACTOERWORK को बारेमा प्रकाशित। रोनाल्डको फिल्महरू NLP प्रविधिहरूसँगै फट्दै छन् र एक अचम्मको स्तरमा विश्वास प्रदान गर्छन्। न केवल मुख्यधारा मिडियाले हामीलाई खेल्छ, तर वैकल्पिक मिडियामा पनि शिलहरू। प्रमुख सफाईको लागि समय: DEMMATING
2 सेप्टेम्बर 2017 मा 11: 42
2 सेप्टेम्बर 2017 मा 13: 00
केही विद्यालयहरू फेरि सुरु भएको छ र सोमवार "सबै" विद्यालयहरू सुरू भएको छ (सोमबार, मौकाको कारण महिनाको पहिलो सोमबार हो र त्यसैले अलार्म सरन फेरि बन्द हुन्छ, चिन्ता / आतंक मोड फेरि प्रयोग गरिन्छ)।
साना को प्राथमिक विद्यालयहरुमा आवश्यक छ! जवान (राज्य) समाचारहरू हेर्न को लागी अब विस्तार गरिएको छ र अहिले 20 मिनेटको रूपमा लिन्छ।
उच्च विद्यालयमा! तपाईं शिक्षक शिक्षक / शिक्षकको समाचार हेर्नुहुन्छ
त्यसैले तपाईंले आफ्नो डिग्री प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईं झूट सिकाउन र पाठ्यक्रम तपाईं शिक्षक विरुद्ध किनभने 90% प्रत्ययनीय छ तपाईं स्कूलमा के सिक्न जाने र सूत्रहरू (गणित), नियम (व्याकरण) प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ बाध्य छन् र अवलोकन (जीव विज्ञान र भौतिकी)
तर सामाजिक महत्त्व र इतिहासको महत्त्वपूर्ण विषय सबैले "समाज" मा पछि लाग्नु पर्छ यो नियम वा सूत्रको विरुद्ध एक विद्यार्थी परीक्षण गर्न सक्दैन, यो एनओएस समाचार मार्फत गर्नु पर्दछ। किनभने सामग्रीको 90% (गणित आदि |) विश्वसनीय छ, तिनीहरू पनि मान्छन् कि NOS (राज्य) जर्नल सही छ, जबकि भित्ता समाज धेरै फरक देखिन्छ जस्तो कि उनि विद्यालयमा जान्छन्
यसैले म यो सबै लेख प्रिन्ट गर्न र कक्षामा छलफल गर्न प्रत्येक शिक्षक र निर्देशक र समाज शिक्षक / es मा कल गर्दछु। बस गर्नुहोस्, र एकपटक डराउनुहोस्। (त्यहाँ पहिल्यै पर्याप्त चिन्ता छ), वा विद्यार्थीले यसलाई स्कूलमा लैजान्छ र तपाईंको समाज शिक्षक / शिक्षकलाई देखाउँछ
सबै पछि, हामी नि: शुल्क भाषण, दायाँ देशमा बस्छौ?
2 सेप्टेम्बर 2017 मा 13: 53
राम्रो टुक्रा। राम्रो भेडा, जबसम्म तिनीहरूले वरिपरि पाउन सक्दछन्, तथ्यहरूले उनीहरूको चासो गर्दैनन्।
होल्यान्डमा भेडा सबै अनुयायीहरू, कपडाहरू र भित्ताहरू हुन्। विचार गर्न जारी राख्नुहोस् र समूहको रूपमा व्यवहार गर्नुहोस्। तपाईं यसको लागि जन्मेका थिए र तपाईं त्यस कारणको लागि अवस्थित हुनुहुन्छ। म यो भन्छु यो जस्तो छ।
2 सेप्टेम्बर 2017 मा 16: 26
ठीक छ, दुर्भाग्यवश यो यति मेरो अनुभव संग छ कि यो साँच्चै मेरो लागि काम गर्दछ। र त्यो राम्रो छैन।
विभाजित र विजय गर्नुहोस्
यसलाई पिरामिड निर्माण मार्फत आफैलाई अझ राम्रो बनाउनुहोस्
हामी आफैमाथि आत्मविश्वास गुनासो,
किनभने यसले हामीलाई सेवा गर्दैन र यो दुरुपयोग भएको थियो। त्यसपछि बाकी पछि, किनकि राम्रो लाग््छ ... वा केवल सुरक्षित ... .चिज्नेभिल। डरमा जाँदा झूटो सुरक्षा। र त्यो शानमा सुरक्षामा, कपटीले यसको प्रजनन मैदान पाउँछ।
सम्मोहनशील सबै कुरा आशीर्वादको रूपमा मन पराउँछन्, र कानुनहरू जान्न र उनीहरूको निरीक्षण गर्न वा तिनीहरूलाई परिवर्तन गर्न भन्छन्, र तपाईंलाई एक क्षण बताउछ। तपाईं तँ (जी) अनाथ बन्नुभयो र त्यसपछि उचाईको लागि प्रशिक्षण पाउनुहुन्छ जहाँ उनीहरु चाहानुहुन्छ वा तपाईं कि सक्नुहुनेछ।
प्रमाणिकता हाम्रो वास्तविक अभयारण्य हो र व्यक्ति पूरा गर्दछ। व्यक्ति एक अविश्वसनीय दुई इकाई हो। चाँडै व्यक्तिले उहाँलाई बाहिर केहि चीजको साथ लिन्छ, यो एक व्यक्ति हुन्छ, जुन वास्तव मा मास्क को अर्थ हुन्छ।
मास्क अधिक सराहना गरिन्छ र बेंचमार्क बन्यो। को
व्यक्ति विभाजित गरिएको छ र त्यसैले टूटेको छ।
विभाजित गर्नुहोस् र सही विजय गर्नुहोस्?
घोर स्थानमा औंला राख्दा यसले पीडा बिन्दुहरू कहाँ छ भनेर स्पष्ट पार्छ, तर तपाइँ सबैको बारेमा खुसी बनाउनुहुन्न। तर आवश्यक छ!
2 सेप्टेम्बर 2017 मा 19: 56
के मैले पनि रोचक छ कि 'कुनै पनि' को लागि फ्रांसीसी शब्द isne हो।
र फ्रान्सेलीमा 'व्यक्ति' पनि personne (र व्यक्ति)
2 सेप्टेम्बर 2017 मा 20: 39
2 सेप्टेम्बर 2017 मा 23: 34
तपाईंको लेखको पहिलो अनुच्छेदमा तपाईंले वर्णन गर्नुभएको व्यक्तिको प्रकार मलाई चिन्ताजनक छ। यसलाई लगभग उल्लङ्घन भनिन्छ। म तिनीहरूलाई मेरो छिटो वातावरणमा पनि थाहा छु। तर कसले गर्दैन?
कहिलेकाहीँ यो पनि मानिसहरू हो जसले आफैंलाई राम्ररी चिनिन्छ 'र एक निश्चित अर्थमा' मानसिकता 'पनि सोच्न सक्छ।
जब मैले वोक्सक्रान्टलाई प्रश्नको प्रश्नमा उभिरहेको देख्छु, र म यस्तो कुरा सुन्छु: "के तपाइँ अझै पनि यो अखबार पढ्नुहुन्छ?" त्यसपछि तपाई जवाफ दिनुहुन्छ कि तपाईंले 'नराम्रो' हुनु हुँदैन।
त्यसपछि त्यहाँ केही गल्ती छ। प्रायः तिनीहरूसँग के छन् भनेर थाहा छैन।
यसबाहेक, तपाईंसँग अझै पनि व्यक्तिहरूको कोटी छ जुन सामान्य रूपमा, यो हेर्नुहोस्, तर समाजको 'ढाँचामा' घुमाउन जारी राख्छ।
भर्खरै म ट्रेनमा थिएँ र मेरो अगाडी मेरो मेट्रो थियो। सामान्यतया म लुगाको कागज बायाँमा छोड्छु, तर केही समयको लागि मैले केही समयको लागि खोल्नको लागि। यो तुरुन्तै पूर्ण-पृष्ठ लेखसँग सुरु भयो जुन 'नकली समाचार' लाई समर्पित गरिएको थियो।
यस लेख मा एक 'नकली समाचार संदेश' छ कि राष्ट्रपति Macron को homo को अस्वीकार गरेको थियो। ठीक छ। यसैले हामी पहिले नै त्यो बाटो जान्छौं। ती मानिसहरू गलाएर धकेलिएका छन् कि म्याक्रोन बिल्कुल समलैंगिक छैन। के यो म्याक्रोन समलैंगिक छ वा होइन भनेर मनपर्छ? होइन, यसले कुरा गर्दैन। तर यो आकर्षक छ कि त्यहाँ एक युग हो जहाँ यो निर्धारित हुन्छ सत्य के हो र सत्य होइन। र त्यो परेशान छ।
तपाईं सोच्न चाहानुहुन्छ कि यो नक्कली समाचार नागरिकलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्नुपर्छ। के तपाई सोच्नुहुन्छ
मार्टिन, अर्को राम्रो लेख। बढी ध्यान दिनुपर्छ।
3 सेप्टेम्बर 2017 मा 00: 00
समस्या यो हो कि मान्छे अहिले पनि त्यत्तिकै हो कि उनि पनि यस्तो चाहेंगे कि सत्यको सेवकाई हो।
यस अर्थमा हामी निष्कर्ष निकाल्न सक्छौं कि मान्छे आफ्नो अन्तिम दासत्वको योग्य हुनुहुन्छ।
3 सेप्टेम्बर 2017 मा 06: 10
सही यदि तपाईं लेख्नुहुन्छ कि मान्छे आफ्नो अन्तिम दासत्वको योग्य हुनुहुन्छ। मान्छे
स्वतन्त्रताबाट डराउँछ। तिनीहरू आफैले आफ्नो जीवन संरचना, आफैलाई सोच्न र आफ्नै निर्णयहरू गर्नुपर्छ। उनीहरूले / चाहँदैनन् भनेर। तिनीहरूलाई निर्देशित स्वतन्त्रता दिनुहोस् जुन तिनीहरूको लागि पर्याप्त छ। तिनीहरू दास हुन र तिनीहरूलाई दिमाग दिनुहोस् कि तिनीहरूका मालिकहरूले तिनीहरूलाई प्रेम गर्छन्। ठूलो भाइले तिनीहरूलाई माया गर्छन्।
3 सेप्टेम्बर 2017 मा 05: 23
4 सेप्टेम्बर 2017 मा 07: 45
4 सेप्टेम्बर 2017 मा 08: 37
अन्तिम रात मैले फेसबुकमा निम्न पोस्ट गरेँ। यसले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि ट्राल कसरी काम गर्छ र वैकल्पिक मीडिया कसरी नियन्त्रण गरिन्छ:
#RonaldBernard व्यापारमा #trollen काम गर्दछ कसरी कठिन उदाहरण। लुइस डे लान नाउँ गरेको यो महिलाले 29 अगस्त को यस पोष्टमा सुझाव दिएका छन् (पोस्ट हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://www.facebook.com/louise.delange.169/posts/916531648497380) कि मैले उनको लागि मित्रता अनुरोध गरेको छु, उसलाई कुरा गरें र रिपोर्ट गरें कि म पिउन र सप्ताहांत को लागि रात को उजागर गर्छु। त्यसपछि मैले उसलाई अवरोध गर्यें। यद्यपि, म यस पृष्ठबाट कुनै पनि मित्र अनुरोधहरू गर्न सक्दिन। मलाई महिला थाहा छैन र यो स्पष्ट रूपले मलाई धकेल्न र रोनाल्ड बर्नार्डलाई हौसला दिनुको अर्थ हो। निस्सन्देह उनी मेरो नाम नामकरण गर्न सक्दैनन्, किनभने त्यो अत्यन्तै स्पष्ट र कडा-मनपर्दो स्वतन्त्रता र निन्दा हुनेछ (जुन सजाय हुन्छ, यद्यपि मेरो घोषणाहरूमा कहिल्यै पनि छैन)। मैले भर्खर यो भिडियोमा राखें। यदि उनले अरू कसैको मतलब भने, उनले कम्तीमा मेरो निर्देशनमा सुझाव राखे। लुईस, यदि तपाईले बिर्सनु भएको छ भने, तपाईले मेरो नाम बोल्नुहुन्छ र तपाईले बिना प्रमाण चिन्हको साथ आउँदछ, ताकि म एक रिपोर्ट फाइल गर्न सक्छु। रोनाल्ड बी। ब्लाजले यो मनपरायो मनपरायो, त्यसैले उनी अहिले आफ्नो साँचो प्रकृति देखाउँछन्।
>>>> अद्यतन 00: 55 < <<<टिप्पणीहरूबाट यसले देखा पर्यो कि लुइसको पोष्टले पृष्ठ वैकल्पिक मीडिया नेदरल्यान्डबाट एक लुका सानालाई निर्देशन दिएको थियो। यसबाट म निम्न निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं ... त्यसैले trolls खेल खेल्न: * ट्रोल 1 (LUCA Sanna) 25 अगस्ट नीलो सम्पर्क मार्टिन Vrijland बाहिर अन्तिम लगाउनुहुन्छ र पनि उसलाई अचानक सुझाव पठाउँछ .. अज्ञात नभएको (मार्टिन व्रिजल्याण्ड बिना यो थाहा छ), तिनी सक्रिय रूपमा आफ्नो पृष्ठमा क्यानोबेसको प्रवर्द्धन प्रतीत देखिन्छ। यसअर्काको नामले यस पृष्ठको बारेमा वा यो सारा प्रकारको लागि लुका सान्नाको बारेमा कहिल्यै सुनेको थिएन (स्पष्टतः तपाईले सबै कुरामा आँखा राख्नु पर्छ!)। * त्यस पछि, ट्राल 1 ले मार्टिन व्रिजल्याण्डको लागि सबै प्रकारको सोशल मिडिया छलफलमा भाग लिन्छ। टोल2(जसले रोनाल्ड बर्नार्डको बचाव गर्दछ) ट्राल 1 (जो रोनाल्ड बर्नार्डलाई आक्रमण गर्दछ) सँग छलफलमा संलग्न हुन्छन्। * छलफलको कारणले गर्दा ट्रेलले मार्टिन व्रिजल्याण्डबाट 1 लेखहरू प्रयोग गर्दछ, यो सुझाव यो हो कि यो व्यक्ति मार्टिन व्रिजल्याण्डसँग सम्बद्ध हुनुपर्छ। * किनभने आफ्नो पृष्ठ पनि धेरै सक्रिय भांग उत्पादन र खपत बढावा मा ट्रोल 1, यसरी स्वतः धेरै को अवचेतन मा सुझाव बन्नेछ कि "मार्टिन Vrijland adherents blowers" (धेरै नकारात्मक stigma नजरमा छोटो)। त्यसपछि सर्कल पूरा भयो। यो एक परिष्कृत खेल हो जुन सबै दर्ताहरू खुलिएका छन्। यसमा केहि प्रश्न छैन कि मलाई कन्नबस संग केहि गर्न को लागी वा छैन। सुझाव र बेहोश लिंक नकारात्मक स्ट्रिमाको लक्ष्यको साथ, नपढ्ने पाठकमा राखिएको छ। लुइस डे लेंजको पोष्ट मेरो ठेगानाको अर्थको रूपमा धेरै सजिलै व्याख्या गरिएको हुन सक्छ (किनभने उनी धेरै अनुयायीहरूसँग ठूलो विकल्प मिडिया साइटमा उल्लेख गर्दछ)। तर यो हरेक व्यक्ति (LUCA Sanna) पछि भने वैकल्पिक मिडिया नेदरल्यान्ड्स पृष्ठ देखिन्छ अचानक जब, त्यसपछि त अझै पनि मेरो व्यक्तिसँग लिङ्क (यो व्यक्ति म एक पटक विभिन्न छलफलहरू समर्थन थियो) छ। संक्षेपमा: परिमार्जित, स्मार्ट र धेरै विचारशील। AIVD संलग्नताको गन्ध बलियो हुन्छ। [/ QUOTE] टोलहरूको सूची ठूलो छ! केवल यहाँ रेकर्डको लागि मैले यहाँ स्थानमा 25 बाट प्राप्त गरेका ईमेलहरू, वैकल्पिक मीडिया नीदरल्याण्ड पेज (लुका सान्ना) पछिको व्यक्तिबाट। मैले पहिले कहिल्यै उनको बारेमा सुनेको थिएन। त्यहाँ केवल टोलहरू मात्र छन् जुन तपाइँले आक्रमण गर्छ, तर यो पनि भनौं कि तिनीहरू तपाईका सँगी-पुरुष हुन्, त्यसपछि तपाइँलाई एक निश्चित घिमिरे वा दर्शनसँग जोड्न। तिनीहरूलाई अनमास्क गर्नुहोस्, त्यसपछि तिनीहरू खतरा हुनेछन्: https://www.martinvrijland.nl/wp-content/uploads/2017/09/Luca-Sanna-email-compleet.mp4
4 सेप्टेम्बर 2017 मा 09: 08
मैले तपाईंको भिडियो देखेँ र मलाई एक वास्तविक खेल सेट र विजयको म्याच भन्न चाहन्छु। धेरै शैक्षिक।
4 सेप्टेम्बर 2017 मा 10: 40
यो स्वत: लुका साना प्रतिक्रिया फेसबुक फिल्टर द्वारा लुकाइएको प्रतिक्रियाले राम्रो तरिकाले देखाउँछ कि कसरी ट्रोलहरू इन्भेस्टमेन्ट गर्छ र चीजहरू बदनाम गर्न सक्दछ। त्यसैले उहाँ यहाँ दावी गर्नुहुन्छ कि मैले उसलाई निजी सन्देश मार्फत धम्की दिएँ। यो भिडीयोमा देखाईएका इ-मेलहरूबाट (यस लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्: https://www.martinvrijland.nl/wp-content/uploads/2017/09/Luca-Sanna-email-compleet.mp4) राम्रो हुन सक्छ कि म खतरा छैन, तर मेरो दिशामा धम्की दिइन्छ।
4 सेप्टेम्बर 2017 मा 10: 43
बेशक मैले 'थप हेर्नुहोस्' मा क्लिक गर्नु भएको थियो।
4 सेप्टेम्बर 2017 मा 10: 49
त्यसैले यो एक धेरै परिष्कृत खेल हो र त्यहाँ केही खेलहरू छन् जुन खेल खेल्न प्रयोग गरिन्छ। तपाईंसँग व्यक्तिहरू जुन तपाईंसँग प्रत्यक्ष रूपमा आक्रमण गर्नुहुन्छ र जो लोग सहयोगीको रूपमा कार्य गर्छन्, तर अप्रत्यक्ष रूपमा अपरिवर्तनशील वा एक निर्धारित स्तम्भमा तपाईंको लेख लिङ्क गर्नुहोस्।
यो वर्षको लागि मलाई भइरहेको छ र तपाईं लगातार सजग रहनु भएको छ जसले मानीएको मान्छे र प्रतीत भई सहयोग पुर्याउनु गोपनीय रूपमा तपाईंलाई बदनाम गर्ने लक्ष्य छैन।
4 सेप्टेम्बर 2017 मा 15: 11
केवल यो मानिन्छ कि ट्रल्स आउँदछ किनभने तपाईं आफ्नो बेबीलोनिक क्लाइन्टको स्थिति बिग्रेको छ। तपाईं आफ्नो साइट मा धेरै पोस्टर जस्तै यस संसारको होइनन्। तपाईं स्टेफ बोसको गीत थाहा छ, यस संसारको होइन, यूट्यूबको गीतको गीत सुन्नुहोस्।
4 सेप्टेम्बर 2017 मा 17: 30
« भाषण, किताबहरू, संगीत, चलचित्रहरू, खेलहरू र इन्टरनेट: भाषाहरूको घातक बाबिलियन भ्रम?
क्या AIVD नेदरल्याण्ड्स मा पूर्वी जर्मन (डीडीआर) स्टेसी को रणनीति को परिष्कृत गर्यो? »
कुल भ्रमण: 2.460.164